के पृथ्वीको आयु बैज्ञानिकहरुलाई थाहाँ हुन्छ र ? साच्चै पृथ्वी खिईएर सकिदै गएकै हो त ? यस्ता छन वैज्ञानिक तथ्य - सुदूरखबर डटकम
के पृथ्वीको आयु बैज्ञानिकहरुलाई थाहाँ हुन्छ र ? साच्चै पृथ्वी खिईएर सकिदै गएकै हो त ? यस्ता छन वैज्ञानिक तथ्य
label समाचार प्रकाशक query_builder October, 26 2018
एजेन्सी । विभिन्न बैज्ञानिकहरुले पृथ्वीको आयुका बारेमा बोल्ने गरेका छन् । कहिले समुन्द्रको उचाई ह्वात्तै बढ्ने भएकाले सबै जमिन पानीले छोपेर अन्त्य हुन्छ । भनेका छन् कहिले आँकाशमा विभिन्न खगोलीय पिण्डबीचको ठक्करले फेरी पृथ्वीको अस्तित्व सकिन्छ भनेका छन् । तर प्रत्यक्ष आँखाले नै देखिनेगरी पृथ्वीमा ठूला–ठूला चिरा पर्न थालेका छन् । अफ्रिकी प्लेट सोमालिया र नुबियानमा छुट्टिँदै जाँदा इथियोपिया, केन्या र तान्जानियासहितका देशको भूभागनै छुट्टीदै जान थालेको छ । यसले खगोलविदहरुलाई झस्काएको छ । यो क्रममा दक्षिण पश्चिम केन्याको भूभागमा अकस्मात ठूलो चिरा देखिएको छ । यो पृथ्वीमा भएको विभिन्न प्लेटहरु मध्यएको एक प्लेट नै छुट्टीन लागेको हो भन्ने प्रक्षपणले सबैलाई झनै झस्काएको छ ।
अफ्रिकी राष्ट्र केन्याको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रको भूभागमा परेको चिरा सामान्य छैन । कयौँ किलोमिटर लामो त्यो खाडल यतिबेला निरन्तर बढ्दै गएको देखिन थालेको छ । धर्ती फाट्ने सो क्रम विस्तार हुँदै जाँदा राजधानी नैरोबी–नारोक राजमार्ग नै फाटेको छ । यो स्थिति भयावह हुने हो की भन्ने चिन्ताले विश्वभरीका भुगर्वविदहरुले त्यहाँ नजर लगाएका छन् । उनीहरुले यस्तो हुनुको अर्को कारण के पनि सो क्षेत्रको सतह मुनि भूकम्प सक्रिय भइरहेको पत्ता लगाएका छन् । यद्यपी बाहिर नै महसुस हुनेगरी भने त्यो देखिएको छैन । केन्याको घटनापछि वैज्ञानिकदेखि सार्वसाधारणसम्म अफ्रिकी महादेशको भूखण्ड टुक्रिँदै छ भन्ने सन्देशले सबै चकित बनेका छन् । यो बिषयमा जहाँपनि कुरा हुन थालेको छ । यसलाई भूगर्वविद्का लागि अध्ययनको विल्कुलै नयाँ क्षेत्र थपिएको भन्ने चर्चापनि चुलिएको छ । हुन त पृथ्वी निरन्तर परिवर्तन भइरहने ग्रह हो। भूसतहमा भइरहने यी परिवर्तनबारे सामान्य मानिसले सरसर्ती हेर्दा खासै थाहा पाइँदैन।
थलमण्डल तन्किन थालेपछि अन्ततः भूसतहमा रिफ्ट भ्याली निर्माण हुन पुग्दछ। त्यस्तो भूभागमा भूकम्प र ज्वालामुखीका गतिविधि सक्रिय हुन थाल्छन्। अहिले देखिएको भूसतह चिरा पर्ने क्रम अफ्रिकी महादेश छुट्टिने प्रारम्भिक चरण भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। यसले पूर्णता पाउँदा नयाँ महासागर जलाधार निर्माणसम्म हुनसक्छ। यसको एउटा उदाहरण दक्षिण आन्ध्र महासगार निर्माण हो। करिब ३ करोड ८० लाख वर्ष पहिले दक्षिण अमेरिका र अफ्रिका महादेश छुट्टिँदा दक्षिण आन्ध्र महासगार निर्माण भएको थियो। त्यही शैलीको भूसतह चिरा पर्ने क्रम यतिबेला अफ्रिकी मुलुकहरुमा देखिइरहेको छ। महादेश पूरै टुक्रिने काम आजको भोलि हुने होइन। यसका लागि थलमण्डललाई तोड्न सक्ने शक्ति निर्माण गर्न आवश्यक पर्छ। त्यो तहको शक्ति एकै पटक सञ्चय हुने पनि होइन। त्यसका लागि लाखौं वा करोडौं वर्षसम्म पनि लाग्नसक्छ।
पूर्वी अफ्रिकामा भूसतह फाटेर निर्माण भएको रिफ्ट भ्यालीको चित्र अन्तरिक्षबाट हेर्दा पनि स्पष्टैसँग देखिन थालेको छ। तर पूर्वी अफ्रिकी रिफ्ट भ्यालीहरूको भौगोलिक अवस्थिति एक अर्कोसँग मेल खाने किसिमको छैन। किन भने ती एकै पटक निर्माण भएका होइनन्। अफ्रिका महादेश टुक्रिने प्रक्रिया भने करिब ३ करोड वर्ष पहिले उत्तर इथियोपियाको अफार क्षेत्रबाट सुरु भएको थियो। यतिबेला यो विस्तारै दक्षिणको जिम्बावेतर्फ फैलिँदै गएको छ। पृथ्वी चिरा पर्ने यो क्रम औसतमा वर्षेनी साढे २ देखि ५ सेन्टिमिटरका दरले भइरहेको छ।
महादेश छुट्टिने यो प्रक्रिया बढ्दै गर्दा भविष्यमा ज्वालामुखी पनि सक्रिय हुने वैज्ञानिकहरुको अनुमान छ। पूर्वी अफ्रिकामा पृथ्वी चिरापर्ने काम अनौठो छैन। दक्षिणतिरका चिराहरु ताजा हुन्। अफार क्षेत्रका रिफ्ट भ्यालीलाई ज्वालामुखीका चट्टानले ढाकेका छन्। यसले के देखाउँछ भने पूरै क्षेत्रमा थलमण्डल निकै पातलो भएको र टुक्रिने चरणमा पुगेको छ। यो क्रम पूरा भएसँगै नयाँ महासागर बन्न शुरु हुनेछ। प्लेट टुक्रिँदा माग्मा तरलबाट ठोसमा परिणत हुन्छ। त्यसले पृथ्वीमा ठूलो खडाल निर्माण गर्छ। सो ठाउँमा पानी भरिएर महासागर निर्माण हुन पुग्छ। यसका लागि दशौँ लाख वर्ष लाग्ने वैज्ञानिकहरूको मत छ। यो अवधिभित्र अहिले पूर्वी अफ्रिकी देशहरुमा चिरिएका खाडलहरु पानीले भरिनेछन्। यसरी भूभाग टुक्रिँदा अहिलेको अफ्रिका महादेश सानो आकारमा सीमित हुनेछ। ‘हर्न अफ अफ्रिका’ क्षेत्रको जिबुटी, इरिट्रिया, इथियोपिया र सोमालियाको क्षेत्र हिन्द महासागरको एउटा ठूलो टापुको रुपमा स्थापित हुनेछ।भिडियो हेर्नु यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।